Indlu yaseCurral - uRamela - I-Airbnb
Indlu yaseCurral - uRamela
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguLuis
E-Casa do Curral unokufumana zonke izinto ezithuthuzelayo zokuhlala kakuhle kude nezihlwele kunye noxolo lwedolophana encinane yeentaba. Ukhenketho lokuhamba kwintlambo yomlambo iTeixeira, ecaleni kwendlela endala yeMala Post Way, ibonelela ngeendawo ezahlukeneyo kwixesha ngalinye lonyaka.
Indlu itholakala eRamela, ipalamente yesiPhuthukezi kumasipala wase Guarda enabemi abangama-218, equka iilali ezi-4 ezihlonyelweyo: iAldeia Nova, iAldeia Ruiva, iSerra da Borja kunye neDominga-Feia.
Kwilali yaseBarracão, ungangcamla iikhowudi ezintle kwiCafé Restaurante Tamar (osuka kumzala uCilita), oyena mntwana ubalaseleyo kunye nenyama eyojiweyo kwingingqi kwindawo yokutyela yaseCidália okanye ezona zitya zibalaseleyo zosuku kwindawo yokutyela yasePetisqueira.
Phakathi kukaNovemba noJanuwari ungandwendwela indawo yokusila yeoli yomnquma (nguMnu. Porfirio) esebenza ngokupheleleyo kwaye ngethamsanqa usenokuzama ezinye iitibornas (isonka esithotywe phezu kwamalahle ngeoli yomnquma). Kubakhweli abanamava, kusenokwenzeka ukuququzelela ukhenketho lwamahashe (abantu aba-2 ubuninzi).
UNksz Cecilia, oyena mlimi mkhulu weoli yomnquma edolophini, unokwamkela iindwendwe ezifuna ukuba nenxaxheba kwisivuno somnquma.
Ukunye noNksk. Helena unokuya kwisitiya semifuno, ukuya ekuvuneni, ukuya kukha icheri, ii-apile, amapere, i-chestnuts okanye iitapile.
Ifumaneka eVale da Teixeira, sisiqalo esihle sokufumana ezinye iindawo, ezinje ngeManteigas, Belmonte, Guarda, Sabugal, Marialva, Serra da Estrela (ezemidlalo zasebusika), Sortelha, Linhares da Beira. Ehlotyeni ungonwabela iilwandle zomlambo iValhelhas, Rapoula do Côa kunye neBarragem do Caldeirão.
Kwiibhafu ezishushu zaseCró, umgama omfutshane, ungonwabela THERAPEUTIC THERMALISM, WELLNESS kunye nePHYSIOTHERAPY iinkonzo.
Inombolo yomthetho: 102556/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ramela